भयङ्कर षडयन्त्रको पर्दाफास – प्रधान न्यायधीश सुशीला थिइन् तर असली प्रधान न्यायधीशका रुपमा एउटा ग्याङले काम गरिरहेको थियो !! – Sanghiya Online
Posted on : May 2, 2017 May 2, 2017 - No Comment
काठमाडौं । षडयन्त्रको सहस्र जालोहरुको एकसाथ तानाबाना बुन्दै गरिएको एउटा भयङ्कर खेलबाट मुलुक बचेको छ । भित्रभित्रै र अत्यन्तै सुनियोजित ढंगबाट गरिएको सो षडयन्त्र अब लगभग असफल भएको छ । त्यो षडयन्त्र सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्कीलाई अगाडि सारेर मञ्चन गराउँदै आइएको थियो । षडयन्त्रको चरम उत्कर्षका लागि तयारी हुँदै गर्दा त्यसलाई निस्तेज र असफल पार्ने काम कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गरेका छन् । आइतबार अचानक प्रधान न्यायधीश कार्की विरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा धेरैले आश्चर्य माने । भित्री कुरा बुझेर बोल्नुपर्ने जिम्मेवारहरुले पनि हतपतमा लतपते प्रतिक्रिया दिएर सुशीला कार्कीको बचाउ गरे ।
उच्च स्रोतहरु भन्छन्– वास्तवमा कार्की विरुद्ध हतारमै महाभियोग ल्याइएको हो, कार्की ठूलो षडयन्त्रको मोहरा बनिरहेकी छिन् भन्ने संकेत पहिलेदेखि नै मिल्दै आएको थियो तर षडयन्त्रको चरम रुप देखाइन लागेको थाहा पाएपछि हतारमा महाभियोग लगाइएको हो । उम्मेदवारी दर्ताको मुखैमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले महाभियोग दर्ता गर्दा कतिपयले चुनाव भाँड्ने डिजाइन अनुसारको काम भनेर आलोचना पनि गरे । तर, चुनाव रोक्ने डिजाइनमा कार्की लागेकी थिइन् । सो डिजाइन तोड्दै चुनावको सुनिश्चितता गर्न महाभियोग ल्याइएको सुनेर धेरै मानिस छक्क परेका छन् । सुशीला विरुद्ध महाभियोग नल्याइएको थियो भने चुनाव भाँड्न उनले कुनै न कुनै अश्त्र फाल्ने निश्चित थियो ।
चुनाव भाँड्ने मात्र नभएर लोकतन्त्रकै घाटी निमोठ्न उनी उद्यत छिन् भन्ने देखिँदै आएको थियो । हिजो अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त पदमा बसेर लोकमान सिंह कार्कीले जेजस्तो अतिरिक्त क्रियाकलाप गरेका थिए, सुशीलाले त्योभन्दा खतरनाक काम गरिरहेकी थिइन् । लोकमान आर्थिक लाभमा लिप्त थिए तर सुशीला आर्थिक लाभमा भन्दा ठूलो राजनीतिक गोटीका रुपमा परिचालित थिइन् । लोकप्रिय निर्णय गर्ने नाममा सरकारलाई कामै गर्न नदिने, चुनाव हुन नदिने, स्थापित राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सिध्याउने र लोकतन्त्रको गला काट्ने काममा उनी लागेकी थिइन् । सुशीलाको षडयन्त्रको अन्तिम रुप देखिनु अगावै कांग्रेस र माओवादीले साहसिक र बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लिए महाभियोग दर्ता गर्ने भनेर । यो निर्णय जोखिमपूर्ण पनि थियो तर यस्तो जोखिम नलिइएको भए चुनाव लगभग असम्भव बन्न सक्थ्यो ।
के गरिन् सुशीलाले ?
सुशीलाले मसिनो पाराले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्वाल पार्न थालेकी थिइन् । उनले विगतको द्वन्द्वलाई ब्यूँताएर नेपाललाई पुनः ठूलो अस्थिरता र रक्तपातमा फसाउने डिजाइनलाई अगाडि बढाइरहेकी थिइन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने मुद्धा मामिला उनले अदालतबाट हेर्न थालेकी थिइन् । नेपाली सेना र तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष दुवैलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा तान्ने काम गरिरहेकी थिइन् । बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरणमा उनले दिएको आदेश निकै खतरनाक थियो । सो आदेशले समग्र शान्ति प्रक्रिया प्रभावित हुने प्रष्ट छ ।
पूर्णता लिने क्रममा पुगेको शान्ति प्रक्रियालाई उल्टाउने काम उनले किन गरिन् ? ढुंगेल प्रकरणमा उनले दिएको आदेश सुनेपछि कांग्रेस र माओवादी दुवै पार्टीका नेताहरु तथा बुद्धिजीवीहरुले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए । सुशीलाले मैना सुनार प्रकरणमा पनि त्यस्तै फैसला दिइन्, जसमा नेपाली सेना तानिन्थ्यो । द्वन्द्वकालीन घटनाहरुलाई के गर्ने भन्ने विषयमा राज्य एउटा टुंगोमा पुगिसकेको छ र नयाँ संविधान समेत बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा बालकृष्ण ढुंगेल र मैना सुनार प्रकरणमा आएको अदालती आदेशले निकै सुनियोजित षडयन्त्रको प्रष्ट छनक दियो । सुशीलाले सरकारलाई कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएकी थिइन् ।
कार्यपालिकाले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने निर्णय उनैले दिन थालिन् । प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा प्रकरणमा उनले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा स्पष्ट हस्तक्षेप गरिन् । त्यति मात्र होइन, कीर्ते कागजातलाई आधार बनाएर प्रहरी महानिरीक्षक पदमा आफूले भनेको मानिसलाई बढुवा गराउने खालको आदेश उनले जारी गरिन् । आवरणमा लोकप्रिय निर्णय गरेजस्तो देखाउने तर भित्रभित्रै लोकतन्त्र नै सिध्याउने खालको खेलमा उनी फस्दै गइन् । जानकार स्रोतहरु भन्छन्– अदालतमा परेका केही रिटहरुलाई आधार बनाएर उनले चुनाव रोक्ने र राजनीतिक परिस्थिति बिगार्ने ढंगले निर्णय गर्न लागेकी थिइन् ।
नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने, अदालतको अपहेलनामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जेल हाल्ने, सरकारका नाममा विभिन्न आदेश जारी गर्ने लगायतका काम गरेर चुनाव हुनै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने सुशीलाको तयारी थियो । यही सुइँको पाएर कांग्रेस र माओवादी सांसदहरुले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । महाभियोग दर्ता हुनासाथ उनी निलम्वनमा परिन् ।
चुनाव भाँड्ने अस्त्र
जगजाहेर थियो– एमालेको मुखमा मात्र चुनाव छ, मनमा छैन । चुनाव भन्ने तर सरकार गिराउने खेलमा एमाले नेताहरु अहोरात्र लागिरहेका थिए । राष्ट्रवादको नाराले आफू लोकप्रिय छु भन्ने भ्रम एमालेलाई थियो तर चुनावी अभियान तेज हुँदै जाँदा एमालेले आफ्नो असली औकात सामाजिक संजालमा गरिएको चर्चा जस्तो छैन भन्ने बुझ्दै गयो । सरकारमा नबसी चुनाव नलडेको एमाले जसरी पनि सरकारमा पुगेर मात्र चुनाव गराउन चाहन्छ भन्ने प्रष्टै थियो । कसै गरे पनि चुनाव भाँड्न नसकिने भएपछि एमालेले सुशीलालाई पनि प्रयोग गर्यो ।
जानकार स्रोतहरु भन्छन्– प्रधान न्यायधीश सुशीला थिइन् तर असली प्रधान न्यायधीशका रुपमा एउटा ग्याङले काम गरिरहेको थियो । सो ग्याङमा एमालेका सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेल, न्यायधीश सपना मल्ल, पूर्व प्रधान न्यायधीश कल्याण श्रेष्ठ लगायतका थिए । यो ग्याङले अदालतको सबै निर्णय भित्रभित्रै लिन्थ्यो । ग्याङले जसो भन्थ्यो सुशीला त्यसै गर्थिन् । राजनीतिक रुपमा चुनाव भाँड्न नसकेपछि एमालेले सुशीलालाई प्रयोग गर्ने बाटो रोज्यो ।
तर, कांग्रेस माओवादीहरु यो कुरा नियालेर बसिरहेका थिए । सुशीलाको हातबाट अन्तिम षडयन्त्र मञ्चन हुनुअघि नै महाभियोग लगाइयो । सुशीलाले विवेकले होइन आवेगले निर्णय गरिरहेकी थिइन् । न्यायधीशमा हुनुपर्ने सबैभन्दा ठूलो गुण विवेक हो तर उनले स्पष्ट रुपमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखाइन् । स्थापित राजनीतिक शक्ति र नेताहरुलाई सिध्याउने उनको अभीष्ट देखिएको थियो । पति दुर्गा सुवेदीको राजनीतिक कुण्ठा पूरा गर्ने र बदला लिनेमा उनी केन्द्रीत भइन् । फलत, सुशीलाको पतन भएको छ ।
चुनाव हुने नै भयो
असम्भव झैं लाग्ने परिस्थितिबाट गुज्रँदै देश चुनावको मुखमा आइपुगेको छ । मंगलबार पहिलो चरणको चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । आजबाट देश औपचारिक रुपमा चुनावमय हुने भएको छ । यो स्थितिसम्म आइपुग्न देशले अकल्पनीय र कठिन प्रसवबाट गुज्रनु परेको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरु, खासगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुबीच भनिरहेका छन्– दसवर्षे जनयुद्धमा झैं ठूलो संघर्ष गर्नुप¥यो चुनावको यो अवस्थासम्म आइपुग्नलाई । चुनाव हुन नदिन देखिने भन्दा नदेखिने खेल र झेल धेरै भइरहेका थिए । त्यस्ता अनेक षडयन्त्रको तानाबानालाई माकुराको जालो झैं पन्छाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुनावको अवस्थामा देशलाई पु¥याउन सफल भएका छन् । षडयन्त्र जारी छ, देशी विदेशी खेल पनि जारी छ, उम्मेदवारी दर्ता भयो, अब मतदान नै हुन नदिने षडयन्त्र हुने निश्चित छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरुले दह्रोसँग खुट्टा टेकेपछि मुलुकको राजनीतिलाई भयंकर अस्थिरतामा लैजान गरिएका यावत षडयन्त्रहरु असफल भएका छन् । तर, अझै पनि मधेसी मोर्चा र एमालेले कुनै न कुनै बहाना निकालेर चुनाव हुन नदिने खतरा भने यथावत रहेको छ । पहिलो चरणको चुनाव भयो भने पनि दोस्रो चरणको चुनाव विथोलेर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने दाउमा उनीहरु लाग्ने निश्चित छ । तर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एक ठाउँ उभिए भने जस्तै षडयन्त्रबाट पनि मुलुक र राजनीतिलाई पार लगाउन सकिन्छ भन्ने फेरि पनि एकपटक प्रमाणित भएको छ र आगामी दिनमा पनि प्रमाणित हुने निश्चित छ ।
भारत बन्यो पाकिस्तान सँगै चीन प्रभुत्व शघांई सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र
माओवादीका वर्षमान पुनको गाडी अज्ञात समुहले थापेको बिद्धुतिय धरापमा, दोहोरो भिडन्त जारी
अहिंसात्मक आन्दोलनमा राज्यले दमन नरोके मधेश युवाहरु हतियार उठाउन बाध्य हुने मधेशी मोर्चाका नेताहरुको चेतावनी
भारतको चीन र पकिस्तानसँग तत्काल सहकार्य हुदैन: भाजपा नेता दिनेश उपाध्याय
हिजो बेलुका मोर्चा भंग गरेको राजपाले आज किन गुहारे फोरम नेपाल